Opinion – Op-ed | Myanmar Gazette News Media Forum Network - Page 10
Opinion – Op-ed	6
pfingo နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာလေးတွေကို ဖြေပေးစေလို
ရန်ကုန်မြို့တွင်း လမ်းပေါ်လူတွေကျဲလှ ဒီနေ့မှ
လူမျိုးရေးလား ?? …. နယ်မြေလုပွဲလား ?? ….